Best Wineries Any Eoropa Sy Ahoana No Ahatongavana Any | Save A Train
Home > Travel Europe > Best Wineries Any Eoropa Sy Ahoana No Ahatongavana Any
Best Wineries Any Eoropa Sy Ahoana No Ahatongavana Any
Fiaran-dalamby Frantsa, Fiaran-dalamby Alemana, Fiaran-dalamby any Italia, Fiaran-dalamby Switzerland, Travel Europe
Fotoana famakiana: 5 minitra(Last Nohavaozina: 07/06/2020)
Ny famangiana isan-divay ny faritra any Eoropa dia nofy isaky ny divay connoisseur. Dia manapariaka tanim-boaloboka mahafinaritra, mafana sy talaky masoandro Weather, ny hilaza tehezan-kavoana, sady tsara sakafo hamaritra ireo faritra divay ambony. Raha ianao tia divay ary te-hahita ny Tsara indrindra Wineries Any Eoropa Sy Ahoana no ahatongavana Any, Save A Train dia hanampy anao hahazo any!
Vakio ny hahafantatra izay Eoropa no mba hanolotra divay tia. Miloka izahay dia ho efa feno ao an-tsainao eo anatrehan'ny nahavita ity lahatsoratra ity!
Best wineries in Eoropa: Frantsa
Champagne Region, Frantsa
Ny sasany amin'ireo malaza indrindra, ary Wineries tsara indrindra tany Eoropa dia hita ao amin'ny Champagne. Izany dia tena tsara toerana mandritra ny andro dia avy Paris, fa maro ireo trano Champagne mba hitrandraka ao na Reims sy Epernay, izay ho hitanao anarana malaza tahaka ny veuve Clicquot ary Tattinger. Ny faritra Champagne vao haingana ny atao hoe UNESCO World Heritage toerana, izay lehibe ho an'ny fizahantany antsapaka ho any amin'ny faritra, miaraka amin'ny tehezan-kavoana Rolling tsara tarehy feno tanim-boaloboka.
Rhône Valley, Frantsa
Ny Rhone-Dohasaha divay faritra dia be ny tolotra avy amin'ny ara-kolontsaina fomba fijery amin'ny Lyon maha-iray ny UNESCO Lova iraisam-pirenena Toerana. Miaraka amin'ny simple, marina gastronomy, Ny Rhône dia ny any an-danitra tia divay sy ny malaza divay ny Crozes-Hermitage, Cote-Rotie sy Châteauneuf-du-Pape nahatan-divay mpizaha tany avy manerana izao tontolo izao.
Aza hatahotra ianao raha vao mitady fotoana tsara tamin'ny sasany aza buddies! Avy amin'ny beginners ny manam-pahaizana, ny Rhone dia azo antoka fa tena iray mba hanampy ny lisitra. Ity ny lisitry ny ny toerana haleha ary ny zavatra ho hitanao.
Lyon mankany Provence amin'ny lamasinina
Best wineries in Eoropa: Tuscany, Italia
Ny Tuscany wineries manolotra ny tonga lafatra divay firenena traikefa. Tsy ny Tuscany ihany no misy ao anatiny Italia fangatahana malaza indrindra, toy ny vaovao Val d'Orcia DOC, Vino Nobile de Montepulciano, ny faritra hipoky ny fireharehana, fitiavana ny tany, sy fifaliana be ny mizara izany amin'ny hafa.
Raha te fa tsy ny drafitra ihany Tuscany divay fitetezam-paritra, afaka miantehitra amin'ny fahaizan'ny mpitari-dalana na ny mpamily ianao. Matetika isika manofa fiara ary manao izany ny tenantsika, fa izahay dia manana mpamily tsy miankina ao Montalcino izay nitondra antsika manodidina antsika nomanina mialoha ny fijanonana. Tena tsara izany fomba mba handeha raha toa ianao manahy ny fiara ao amin'ny faritra, na te hisotro ny divay fa tsy manimba izany.
Afaka boky ny fitsidihana mialoha. Heverinay fa tsara indrindra ho any amin'ny tsy miankina fitetezam-paritra, toa izao Montepulciano fitetezam-paritra, Montalcino fitetezam-paritra, na tavoahangy fitetezam-paritra from Viator.
Soso-kevitra: Tena soso-kevitra koa isika manampy ny winery antoandro ny drafitra isan'andro. Tuscan divay dia natao mba ho tia amin'ny sakafo.
Best wineries in Eoropa: Mosel, Alemaina
Isika rehetra dia mahafantatra Alemaina noho ny labiera ny fiara sy ny, fa hatramin'izao, tsy fantatray fa manana faritra divay kick-ass ihany koa izy ireo.
Teo anelanelan'ny Koblenz ary ny fari-taniny amin'ny Luxembourg lainga Alemaina ny divay tranainy indrindra faritra. efa, ny Romana nahita mety ny mafana micro-toetr'andro sy ny otrikaina-karena tany. ankehitriny, ny tanimboaloboky ny faritra Moselle dia mamokatra sasany amin'ireo Riesling tsara indrindra eran'izao tontolo izao.
Misy olona maro azo isafidianana, fa teo an-tampon'ny amin'ny lisitra dia Weingut Willi Schaer. A tanim-boaloboka kely taonjato indray 1121. Ny Schafer family ny ankamaroany dia miankina amin'ny ny fiofanana fahatsapana ny tsirony sy ny tsara ny fahaizana voajanahary raha ny famaritana ny fotoana tsara indrindra ho vokatra isaky ny fizarana ny tanim-boaloboka. Izay ataontsika dia badass!
Ny fianakaviana mamokatra fotsiny Riesling an- 4.2 hektara ny tany izay mampiavaka ny tonga lafatra mandanjalanja eo amin'ny asidra sy ny rafitra. Nahazo teny fiderana ny manakiana-divay ireo dia nozaraina maneran-tany. Raha te-hanandrana ny divay-toerana, aza hadinoina ny boky fotoana mialoha.
Best wineries in Eoropa: Lavaux, Soisa
be herim-po viticulture: Misy andian-teny izany matetika miasa mba hamaritana ny fambolena ny sarotra ny endriky ny. Lavaux, Suisse dia faritra iray izay maneho tsara ny hevitra.
Lavaux dia divay zana-faritra Vaud, toerana amin'ny tany avaratra amoron'ny Lake Geneva, Soisa. ity faritra, izay mitana an enviable position teo amin'ny atsinanana ny antsasaky ny farihy, fantatra fa mamokatra steely fotsy divay, indrindra fa avy any amin'ny Chasselas voaloboka.
The voalohany ny masonao hapetrako eo ambonin'ny-tanan-tohatra ny hantsana, ianao namely ny impracticality izany rehetra. (Indrindra fa hamoaka vitsivitsy sy divay eran'ny tavoara). Eken'ny UNESCO ho toy ny World Heritage Site, Masoandro-nitso-drano izany lafiny Lake Geneva ahafahanao mamoaka ny Fairytale fametrahana ny lavarangana feno voninkazo, shimmering rano manga izay mety ho tanteraka ihany koa amin'ny vera Chasselas an-toerana. Toy izany koa, ny farihy-namihina ny teti-dratsin'ny soar teo tafahoatra slants izay osy sy ekipan'ny tendrombohitra ihany no tokony hijinja.
Nandritra ny taonjato faha-11, ireo be havoana an'ny Benedictine sy Cistercian monasitera. I moanina izay nizotra ho any amin'ny faritra ala teo aloha an-tanim-boaloboka mamokatra izay hitranga manana fahitana namafa.
Izany no nahita avy tamin'ny lamasinina varavarankely eo amin'ny fomba Lausanne:
Ny tanànan'i Lausanne tonga lafatra iray toerana amin'ny faran'ny Lavaux. Izany no mahatonga ho tsara ny heviny ny trandrahana ny faritra. Ao anatin'ny Soisa, Lausanne, raha ny marina ny maro an'isa tompony rehefa tanim-boaloboka. (Ny kaominina manana ny divay mitombo tsy misy faritra kely noho 62 baolina kitra saha, mamokatra hatramin'ny 400’000 tavoahangy isan-taona.)
Indray ny kitapo ary hasaina ny fitaratra. Izany&#8217;s fotoana mba hahazo ny fiaran-dalamby na roa mba hijery Tsara indrindra Wineries ao Eoropa. Save A Train dia hanome anareo amin'ny fifadian-kanina sy manahirana tapakila maimaim-poana tsy misy miafina sarany. Inona no miandry? Fotoana haka ny divay, amin'ny!
Tianao ve mba hiraketana ny lahatsoratra bilaogy Tsara indrindra Wineries ny Ao Eoropa Sy Ny Fomba Hahazoana Misy tao an-toerana? Azonao atao na ny maka ny sary sy ny soratra, ary hanome voninahitra fotsiny amin'ny rohy amin'ity lahatsoratra bilaogy. Na tsindrio eto: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbest-wineries-europe%2F- (Horonan-taratasy midina kely ny mahita ny Embed Code)
#EuropeWine #TrainandWine #wineries #winetasting #winetastinginEurope europetravel divay winetour